युगसम्बाद साप्ताहिक - सीमा काटेको राष्ट्रिय निर्णयको अधिकार
Saturday, 01.25.2020, 02:46am (GMT+5.5) Home Contact
सीमा काटेको राष्ट्रिय निर्णयको अधिकार
Wednesday, 11.23.2016, 01:44pm (GMT+5.5)
नेपालकको राजनीतिक–कूटनीतिक अवस्था अहिले निकै जटिल छ । भारतसंग विग्रेको सम्बन्ध सपार्ने नाममा चीनसंग सप्रिरहेको सम्बन्ध विग्रेको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सकिन्छ । नेका–माके गठबन्धनको सरकारले नेपालको समदूरीको कूटनीतिलाई भारततिर ढल्काइदिएको छ र यसैको कारण हो नेपालको राष्ट्रिय विषयहरूको निर्णय समेत दिल्लीबाटै हुने गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेर दिल्लीको निर्देशनमा निर्णय गर्ने परिपाटीले अरु बढोत्तरी पाएको छ । नेपाललाई चीनबाट टाढा राख्न चाहने अनेक शक्तिको चलखेल जारी छ र ती शक्तिहरूले भारतलाई यसको मतियार बनाएका छन् । अनि भारत नेपालमा त्यस्तै सरकारको खोजी गर्छ, जो आफूले भनेको मानोस् । किनभने नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध अरु मजबुत हुँदै नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा चीनको सहयोग बढ्न थाल्यो भने भारत र पश्चिमा मुलुकहरूको पारो तातेर आउँछ । नेपालमा बसेर चीन बिरोधी गतिविधि गर्न नपाइने चिन्ताले ग्रस्त हुन्छन् । यो तथ्य बुझेको चीनले शंकासंगै सहयोगको हात बढाइरहेको छ । तैपनि भारत र पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाल भूमि प्रयोग गरी चीन विरोधी गतिविधि संचालनको आधार तयार पार्न खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समय चिनीया अधिकारीहरूले नेपाली पक्षलाई बारम्बार यस्ता गतिविधिप्रति सचेत गराएका छन् । नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति सदा प्रतिबद्ध रही यसको संरक्षण गर्न बारम्बार जोड दिएको छ ।
यसको विपरीत नेपालको दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत सधैं नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र नेपालका शासकहरू पनि भारतको भनेपछि कुकुरको पनि पाउ मोल्न तयार हुन्छन् । भारत जहिले पनि आफ्ना छिमेकीमाथि प्रभाव विस्तार गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न लालायित हुने गरेको छ । भारतको यही नीतिका कारण दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकसंग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन । भारत आफूलाई दक्षिण एसियाको ठुल्दाइ मान्दै आएका कारण दक्षिण एसियामा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ । भारतको हस्तक्षेपको चरम नमूना नेपाल बन्दैआएको छ । विश्व राजनीतिमा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको नेपाल पश्चिमा मुलुकहरूको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने मैदानका रुपमा परिणत गर्ने गम्भीर खेल चलिरहेको छ र बाह्य शक्तिको रणनीति पूरा गराउनका निम्ति मुलुकका राजनीतिक दलका नेताहरूको उपयोग भैरहेको छ ।
अरुको उपयोगमा आउने हाम्रा नेताहरूको नैतिक दुर्वलताले गर्दा मुलुक इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता अहिले जत्तिको कमजोर यसअघि कहिल्यै थिएन भनेर नेताहरूले नै भन्ने गरेका छन् । नेताहरूले यस्तो भन्ने गरे पनि उनीहरू राष्ट्रियता जोगाउने र जनतालाई जगाउने काम गर्नुको साटो यस विपरीतको कार्यमै तल्लिन छन् । शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीति अनुसार निर्णय गर्ने गर्दा मुलुकको अखण्डतामाथि नै आँच आइरहेको छ । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा होस् वा संघीयतामा एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य निर्माणको नारा स्वदेशबाटभन्दा विदेशबाट बढी लागेको आम जानकारीको विषय भए पनि संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यसलाई सच्याइएन ।
अहिले संविधान संशोधनको कुरा चलिरहेको छ । अंगीकृत नागरिकले पनि राज्यको उच्च तहमा पुग्न पाउनुपर्ने माग उठेकको छ । यो माग नेपालभित्रको नभएर भारतको भएको कुरा जगजाहेर भैसक्यो । जसका लागि संविधान संशोधन गरिने भनिंदैछ उनीहरू नै अंगीकृतको मुद्दा आफूहरूको नभएको बताएर सरकारकताबाट संचालित छ भन्ने दृष्टान्त देखाइदिएका छन् । नेपालमा कुनै एक क्षेत्र छैन, मुलुकले स्वनिर्णय गर्न पाउने । राजनीति त बाह्य निर्देशनको चंगुलमा परेको छ नै आर्थिक–सामाजिक अवस्था पनि त्यस्तै हुन पुगेको छ । नेपाली मौलिक परम्परा ध्वस्त हुने क्रममा छ । आर्थिक पराधिनता बढ्दो छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा मौलाउँदै गएको विदेश परस्तता अर्थतन्त्रमा व्यापक परेको छ । आर्थिक–सामाजिक पराधिनता नै कुनै पनि मुलुकलाई पराधिन गर्ने प्रमुख औजारको रुपमा स्थापित हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा नेपाल विस्तारै भारतको पराधिन बन्दै गएको दृश्यहरू जताततै छरपस्ट हुन पुगेको छ । भारतसंगको व्यापार घाटाको आँकडा नै यसको दृष्टान्त हो ।
यसैले गर्दा मुलुकको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढेको बढ्यै छ । यसमा पनि भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र निर्देशनले मुलुकको राजनीतिलाई वेथितिकै दलदलमा मात्र भास्दै लगेको छ । बाह्य प्रभावका रणनीतिक खेलले जताततै आशंका र आक्रोश मात्र उत्पन्न गरेको छ । मुलुकको समग्र क्षेत्रको जिम्मा लिएको भन्ने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा राष्ट्रियताप्रति पटक्कै सचेतता नहुँदा मुलुकको शिर निहुरेको निउरेकै छ । राष्ट्रियता विदेशीको पाउमा सुम्पने कार्य गरेर पछि पछुताउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । समय छँदै आत्मचेत जगाएर राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सके मात्र काम लाग्दछ । आत्मालोचना त लेण्डुप दोर्जेले पनि गरेका थिए तर मुलुक विदेशीलाई सुम्पिसकेपछि गरिएको आत्मालोचनाको के अर्थ ? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई सुधारेर राष्ट्रिय जागरणको अभियान थाल्नु नितान्त आवश्यक भैसकेको छ । विदेशीले भनेको जे पनि मान्ने गलत संस्कारको अन्त्य अहिलेको एक मात्र आवश्यकता हो । राष्ट्रियता बलियो बन्यो भने कसैले पनि हेप्न सक्दैन ।
मुलुकलाई स्वाभिमानपूर्वक आर्थिक–सामाजिक विकासको दिशामा अघि बढाउने हो भने पराश्रयी चिन्तन त्याग्नैपर्छ । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि नेताहरूको पटक्कै ध्यान गएको छैन । कसरी सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने र कसरी आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने भन्नेतिर मात्रै उनीहरूको दौड रहेको छ । शक्ति आर्जनको भोकले ग्रस्त नेताहरूले राष्ट्रिय मर्यादाको समय ख्याल नगरी विदेशी सामु लम्पसार गर्दा मुलुकको शिर त झुकेको छ नै उनीहरू स्वयंमा पनि आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार नभएको प्रचूर आभास छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति गरेको मुलुकका जनतालाई त्यसपछि भएको दुईवटा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनले पनि राहत दिन सकेको छैन । नेताहरूले निरन्तर झूटो सपना बाँडेर भ्रमको खेती गर्दैआएका छन् । जनतालाई कसरी, कुन उपायबाट भुलाउन सकिन्छ त्यस्तै रणनीति मात्र चलिरहेको छ । जनताको जीवनस्तर उकास्न नसके पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च राखेका भए एउटा सन्तोषको अवस्था हुन्थ्यो तर त्यो पनि अहिले छैन । अहिलेको सर्वाधिक खड्केको विषय भनेको राष्ट्रिय चिन्तनशीलता नै हो । मुलुकको मुहार फेरिने गरी वर्तमानको चुनौतिपूर्ण समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्ने राष्ट्रिय चेतनाले ओतप्रोत भएको राजनीतिक नेतृत्व अहिलेको खाँचो हो र त्यस्तो व्यक्तित्वको उदय नहुँदासम्म राष्ट्रियताको जगेर्ना र जनताको समृद्धिको ढोका खुल्न नै सम्भव छैन । यसले गर्दा समृद्ध नेपालको निर्माणको सपना बाड्नेहरू झण्डै सात दशकको अन्तरालमा धेरै भए तर गरीब नेपालीको मुहार कहिल्यै फेरिएन ।
सधैं सहमति मात्रै खोज्ने हो ? (11.08.2016)
दक्षिण एसियामा मोदीप्रतिको मोहभंग (10.05.2016)
राजनीतिको नाममा अपराधको खेती (09.27.2016)
किन विकृत पारियो ऐतिहासिक संविधान ? (09.20.2016)
सम्बन्ध विग्रिएको भारतकै कारणले (09.13.2016)
विपत्ति निम्त्याउने मान्छेले नै हो (09.06.2016)
पहिला समस्या चिनौं अनि समाधान (08.25.2016)
नेपाली युवाहरुको यथार्थता र युवा दिवस (08.16.2016)
अबको समय पानी संरक्षण (08.09.2016)
राष्ट्रघातको इतिहास नदोहोरियोस् (07.26.2016)
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकमतको उपेक्षा (07.19.2016)
नेपालभित्रै आएर भुटानीकरणको चाहना (07.14.2016)
मनलाग्दो गर्न पायौं तर .... (06.21.2016)
कहाँबाट छिर्छन् नेपालमा आतंकवादी ? (06.14.2016)
अब पनि अब जे गर्छ भारतले गर्छ ? (05.17.2016)
असोज तीन गते ‘कु’ हुने थियो ? (04.27.2016)
जनताको आँखामा छारो हाल्दै सरकार (04.22.2016)
युरोपको आँखामा किन फुलो प¥यो ? (04.12.2016)
भारतको शीतयुद्धकालीन आँखा (03.29.2016)
नेपाल विश्वमा अग्रणी छ महिला अधिकारमा (03.15.2016)